कोभिड परीक्षण देशहरू आवश्यक: सबै देशहरू र आवश्यकताहरू | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 19/04/2021 10:10 | सुझावहरू, सामान्य
थाहा छ कोविड परीक्षण देश द्वारा आवश्यक महामारीको एक बर्ष पछि आवश्यक जानकारी भएको छ। तपाईं उनीहरूसँग अप टु डेट रहन रुचि राख्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई बारम्बार यात्रा गर्नुहोस् व्यापार को लागी वा आफन्तहरु लाई भेट्न।
किनभने प्रत्येक राष्ट्रमा यस रोगबाट संक्रमितको बिभिन्न दर छ खोपहरू ढिलो जान्छ, कुनै सामान्य ढाँचा स्थापना गर्न सकिएन यात्रा गर्न आवश्यक आवश्यकताहरूमा। यसलाई व्यवहारमा राख्नु सम्भव छैन युरोपेली संघ, जसको राज्यहरू पनि आवश्यक हो वा तिनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्न परीक्षणहरू गर्नु हुँदैन फरक पर्दछ। यी सबैको लागि, हामी तपाईंको लागि देश द्वारा आवश्यक कोविड परीक्षणहरूको समीक्षा गर्न जाँदैछौं।
1 कोभिड टेस्टहरू देश द्वारा आवश्यक: आवश्यकबाट सिफारिस गरिएको
1.1 युरोपेली संघमा कोविड परीक्षण
1.1.5 नेदरल्याण्ड्स, कोवीड देशहरूको लागि आवश्यक परीक्षण को मामला मा कडा मध्ये
1.2 युरोपेली संघ बाहिरका देशहरूले आवश्यक कोविड टेस्टहरू
1.2.1 युनाइटेड किंग्डम
1.2.3 स्विजरल्याण्ड, कोभिड देशहरूको लागि आवश्यक परीक्षणहरूको सर्तमा सबैभन्दा बढी माग गरिएको हो
1.2.5 संयुक्त राज्य अमेरिका
कोभिड टेस्टहरू देश द्वारा आवश्यक: आवश्यकबाट सिफारिस गरिएको
हामी युरोपेली युनियनसँगै आफ्नो समीक्षाको थालनी गर्नेछौं किनभने यो समावेश गर्ने देशहरू सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका हुन्। त्यसोभए, हामी विश्वको अन्य भागहरूको अवस्था विश्लेषण गर्नेछौं, विशेष गरी ती देशहरूमा जुन धेरै संख्यामा यात्रु पाउँदछन्।
युरोपेली संघमा कोविड परीक्षण
युरोपियन युनियनका राज्यहरूसँग केहि छ पर्याप्त कडा आवश्यकताहरू जब आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दै। तिनीहरूको क्षेत्रहरूमा महामारीको बलियो विस्तारले यसलाई यसरी सल्लाह दिन्छ। वास्तवमा, सम्बन्धित टेस्टहरू वा पीसीआर परीक्षणहरूको अतिरिक्त, तिनीहरू सामान्य रूपमा अन्य कागजातहरूको लागि सोध्छन्। निकट भविष्यमा, यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि विचार गरिएको छ कोविड पासपोर्ट। देश द्वारा नियम हेर्न गरौं।
विचार गर्नुहोस् España उच्च जोखिम क्षेत्र। त्यसैले, यसको मापन हो सबैभन्दा कडा हो। यदि तपाइँ हाम्रो देशबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ आउनु अघि hours 48 घण्टा भन्दा अघि गरिएको नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा तपाईले भर्ना गर्नुपर्नेछaडिजिटल रेकर्ड र, एक पटक देशमा, एक बचत गर्नुहोस् १० दिनको संगरोध यदि aणात्मक कोविड परीक्षण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने to मा सिमित हुन्छ।
यो क्षण मा स्पेन बाट उडान अनुमति छैन। यदि तपाईंले यो अर्को देशबाट गर्नुभयो भने, तपाईं negative२ घण्टा भन्दा अघि negativeणात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईले पनि बनाउनु पर्छ इलेक्ट्रोनिक शपथ पत्र कि तपाईं रोग बाट ग्रस्त छैन र एक भर्नुहोस् यात्री स्थान। अन्तमा, उनीहरूले माग गर्दछ १० दिनको संगरोध.
थर्मल साइकलर वा PCR मेशीन
हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई उनीहरूको देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छन्, तर तपाईंले नकारात्मक पीसीआर पनि age२ घण्टाको उमेरको साथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र शपथ बयान तपाईसँग कोविड छैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईले बाटोमा वा आगमनमा लक्षण प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईले आत्म-सीमित गर्नुपर्नेछ।
यो एउटा यस्तो देश हो जुन पहिला यस रोगको चपेटामा परेको थियो र स्पेनियर्सको प्रवेशलाई अनुमति दिन्छ। तर, यदि तपाई अचम्मका चमत्कारहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने रोम o Florenciaतपाईंले यात्रा गर्नु अघि most 48 घण्टामा बनाइएको नकरात्मक पीसीआर पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र यात्रा सुरु गर्नु अघि तपाईंले शपथपत्र भर्नु पर्छ। साथै, यदि तपाईंसँग लक्षणहरू छन् भने तपाईंले आफूलाई अलग गर्नुपर्नेछ।
नेदरल्याण्ड्स, कोवीड देशहरूको लागि आवश्यक परीक्षण को मामला मा कडा मध्ये
जस्तो कि हामी तपाईलाई भन्दछौं, स्पेनबाट यात्रा अनुमति दिने राष्ट्रहरू मध्ये यो आवश्यकताको सर्तमा कडा हो। किनकि उनीहरूले तपाईलाई hours२ घण्टा पुरानो पीसीआर परीक्षणको लागि सोध्छन्, साथ साथै एक भर्न चिकित्सा जाँच फाराम दुबै बाहिरबाट र बाटोमा पछाडि र अन्य आवश्यकताहरु.
जहाँसम्म, यदि यी सबै हुँदाहुँदै पनि तपाइँसँग कुनै लक्षणहरू छन् भने, तिनीहरूले तपाइँलाई देश प्रवेश गर्नबाट रोक्छन्। र, यदि यो आइपुगे पछि यो ट्रिगर भयो, तपाईंले बचत गर्नु पर्नेछ १० दिनको संगरोध.
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो पश्चिमी छिमेकीमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, तर विभिन्न प्रतिबन्धहरूको साथ। तपाईंले एक नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र into२ घण्टामा बाहिर तपाईंको देशमा प्रवेश गर्नु अघि।
तपाईंले पनि कभर गर्नु पर्ने हुन्छ यात्री स्थान कार्ड र, यदि स्पेन प्रति १०,००० बासिन्दाहरूमा 500०० भन्दा बढी केसहरूको स्तरमा छ (जुन हालको केसमा छैन), तपाईंले एउटा बचत गर्नुपर्दछ १० दिनको संगरोध। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं जानुहोस् मेडिरा o Azores, तिनिहरु पनि तपाईंलाई एक भर्नुहोस् महामारी विज्ञान प्रश्नावली.
एक व्यक्तिले कोभिड खोप लिन्छ
युरोपेली संघ बाहिरका देशहरूले आवश्यक कोविड टेस्टहरू
हामी राष्ट्रहरूमा मा धेरै किसिमका मागहरू भेट्टाउँछौं जुन साधारण यूरोपीय स्थानमा पर्दैन। केही देशहरूमा प्रमाण आवश्यक पर्दैन, तर हामी त्यसलाई अलग राख्छौं। आउनुहोस् हामी कुन प्रकारको आवश्यकता चाहिन्छ हेरौं।
हामी राज्यबाट शुरू गर्छौं जसले भर्खरै यूरोपियन युनियन छोडेको छ र विश्वमा सबै भन्दा धेरै खोप दरहरू छन्। तपाईले यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई चाहानुहुन्छ, तर तपाईले एउटा भर्नु पर्छ यात्री स्थान फारम तपाईंको आगमनमा थप रूपमा, यो महामारीको पलमा निर्भर गर्दछ जुन यो हो, तपाइँले एक बनाउन आवश्यक पर्दछ १० दिनको संगरोध.
यस देशमा पनि, खोप धेरै उन्नत भएको छ। यद्यपि स्पेनबाट यात्रीहरूको प्रवेशलाई अनुमति दिदैन। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अर्को ठाउँबाट आइपुग्नुभयो भने, तपाईं देश प्रवेश गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर तपाईंले arrival२ घण्टा पहिले गरेको वा नजीकको मितिमा गरेको नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
स्विजरल्याण्ड, कोभिड देशहरूको लागि आवश्यक परीक्षणहरूको सर्तमा सबैभन्दा बढी माग गरिएको हो
स्विस देश पुरानो महाद्वीपको मध्यभागमा छ र यद्यपि यो युरोपियन युनियनको हैन, यो शेन्जेन क्षेत्रको हिस्सा हो। यस सम्झौताले यसको बाह्य सीमाना हटायो, यद्यपि हालसालै स्वीजरल्याण्डले यात्रुको स्वागतका लागि धेरै प्रतिबन्धित छ।
तपाईं यसमा जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईं a२ घण्टा अघि आउनु अघि नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ एक पटक, तपाईं एक बनाउन पर्छ १० दिनको संगरोध तपाईंले अर्को पीसीआर पाउनुभयो भने त्यो7मा कम गर्न सकिन्छ। साथै, तपाइँले एक पूरा गर्नुपर्दछ सम्पर्क ट्रेसि card कार्ड.
देश जुन महामारी बाट आयो अब आगन्तुकहरुलाई स्वीकार गर्न पनि धेरै प्रतिबन्धित छ। यदि तपाइँ चीन यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले पीसीआर रaप्रस्तुत गर्न आवश्यक छ IGM (इम्युनोग्लोबुलिन पत्ता लगाउने) तपाईंको आगमनभन्दा 48 XNUMX घण्टा अघि नकारात्मक बनायो। थप रूपमा, तिनीहरू मा स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा बाहिर गरिएको हुनुपर्दछ स्वेतसूची देशको दूतावास द्वारा प्रदान गरिएको।
केवल यो एक, उसले तपाईंलाई एक दिनु पर्छ tarjeta र जब तपाई चीन पुग्नु हुन्छ, तपाईले गर्नु पर्छ PCR दोहोर्याउनुहोस् र भर्नुहोस् स्वास्थ्य फाराम। यदि पहिलो एक सकारात्मक हो भने, तपाईं एक पास गर्न बाध्य हुनेछ १० दिनको संगरोध.
कोविड - १ test परीक्षण
उत्तर अमेरिकी देशले यात्रुहरूलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ स्पेन मा तपाईंको आगमन पहिले १ days दिन। यदि तपाईं अर्को देशबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ जानकारी फारम र पनि एक स्वास्थ्य बयान जानुभन्दा पहिले थप रूपमा, प्रत्येक राज्यको आफ्नै प्रतिबन्ध हुन्छ.
दक्षिणमा हाम्रो छिमेकी स्पेन बाट उडान स्थगित गरेको छ। यदि तपाईं अर्को देशबाट आउनुभयो भने, तपाईंले यात्रा अघि before२ घण्टा सम्म नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, यो फ्रेन्च, अंग्रेजी वा अरबीमा लेखिएको हुनुपर्दछ। अन्तमा, जब तपाईं पुग्नुहुनेछ, तिनीहरूले तपाईंको लागि सोध्ने छन् यात्री स्वास्थ्य कार्ड.
यद्यपि यो हाम्रो एन्टिपाडहरूमा छ, तपाईंलाई अष्ट्रेलियाको यात्रा गर्न वा आवश्यक हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा, हामी तपाईंलाई त्यो बताउँछौं यो स्पेनबाट अधिकृत छैन। यदि तपाईं अर्को देशबाट बाहिर जानु भयो भने, तिनीहरूले एउटा माग्ने छन् यात्रा कथन र तपाइँaलाई पास गर्न बाध्य गर्न सकिन्छ १० दिनको संगरोध.
महामारीको चपेटामा परेका देशहरूमध्ये एक भए पनि ब्राजिलले तपाईंलाई स्पेनबाट यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। जहाँसम्म, तपाईं एक नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ तपाईंको यात्राको अघि hours२ घण्टा सम्म गरिएको र एक भर्नुहोस् स्वास्थ्य फाराम.
यदि हामी देशहरूद्वारा आवश्यक कोभिड परीक्षणहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, मेक्सिको सबैभन्दा कम माग गर्नेमध्ये एक हो। त्यहाँ यात्रा गर्न, तपाईंले कल कल मात्र गर्नुपर्नेछ जोखिम कारक पहिचान प्रश्नावली तपाईंको आगमनमा यात्रुहरूमा।
क्यारिबियन राष्ट्र, यति ऐतिहासिक रूपमा स्पेन संग जोडिएको छ, यदि तपाईं हाम्रो देशबाट आउनुभयो भने तपाईंलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि यो आवश्यकताको सर्तमा धेरै माग गरिएको छ। तपाईंले यात्रा गर्नु अघि hours२ घण्टा पहिले गरेको पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको आगमनमा, तपाईं भर्नै पर्छaस्वास्थ्य घोषणा र यो सम्भव छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई बनाउनेछन् अर्को पीसीआर। थप रूपमा तपाईसँग भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ दर US० अमेरिकी डलर र, यदि अन्तिम पीसीआर उद्धृत सकारात्मक छ भने, तपाइँ पालन गर्न बाध्य हुनेछ आइसोलेसन.
यो देश पनि महामारीले नराम्ररी प्रभावित भएको छ। वास्तवमा यस क्षणको लागि स्पेनबाट यात्रा निषेध गरिएको छ। यदि तपाइँ अर्को देशबाट गर्नुभयो भने, तपाइँ negative२ घण्टा सम्म पुरानोसँग नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र साइन इन गर्नुपर्नेछ स्वास्थ्यको शपथ पत्र। अन्तमा, तपाईंले योगदान गर्नै पर्दछ प्रमाण छ कि तपाईं बीमा छ यसले कोभिडको कारण सम्भावित स्वास्थ्य व्ययहरू कभर गर्दछ यदि तपाईले रोग विकास गर्नुभयो भने।
न्यूजील्याण्डमा कोविड - १ dete पहिचान केन्द्र
यो महामारीबाट प्रभावित हुने चीन पछि पहिलो राष्ट्रहरु मध्ये एक थियो। हुनसक्छ अरू देशका यात्रीहरूलाई स्वीकार गर्दा यो धेरै कडा हो। स्पेनका ती मानिसहरुको मामलामा यदि उनीहरूले हाम्रो देशमा अन्तिम १ 14 दिनहरू बिताए भने तिनीहरू प्रवेश अनुमति दिदैनन्.
स्पेनबाट उडानहरू निलम्बित गरिएको छ, कम्तिमा पनि अप्रिल 30। यदि तपाईं अर्को देशबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अंग्रेजीमा नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र तपाईंको आगमन भन्दा hours२ घण्टा सम्म पूरा गर्नु पर्नेछ। साथै, तपाईं बचत गर्न बाध्य हुन सक्छ १० दिनको संगरोध.
एन्डियन देश पनि छ स्पेनबाट उडानहरू प्रतिबन्धित छकम्तिमा मध्य अप्रिल सम्म। यदि तपाईं अर्को ठाउँबाट आइपुग्नुभयो भने तपाईंले a२ घण्टा अघि नकारात्मक पीसीआर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तपाईंले अपलोड गर्न पनि आवश्यक पर्दछ नकारात्मक रिपोर्ट र क स्वास्थ्यको शपथ पत्र throughout२ घण्टा सम्म तपाईंको उडान पहिले यो लिङ्क.
अन्तमा, हामी तपाईंको लागि समीक्षाको लागि बनेका छौं कोभिड परीक्षण देशहरू द्वारा आवश्यक। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यदि तपाईं यात्रा लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै प्रतिबन्धहरूको अधीनमा हुनेछ। र यो सुधार गर्न गइरहेको छैन खोप व्यापक नभएसम्म। तर कम्तिमा तपाईं यात्रा राख्न सक्नुहुन्छ, जुन कुनै सानो कुरा होईन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » कोभिड परीक्षण देशहरू द्वारा आवश्यक